Fianakaviana tokana - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
lahatsoratra > Fiainana miaraka amin'Andriamanitra > Aoka ianao ho fianakaviana
Tsy fikasan'Andriamanitra ny hanaovan'ny fiangonana ho andrimpanjakana fotsiny. Ny Mpamorona antsika dia maniry foana ny hitondra tena toy ny fianakaviana ary hifampitahy amin'ny fitiavana. Rehefa nanapa-kevitra ny hametraka ireo singa fototra amin'ny sivilizasiona maha olombelona izy dia namorona ny fianakaviana ho vondrona izy. Tokony ho modely ho an'ny fiangonana io. Miaraka am-piangonana no hilazana ny vondron'izay antsoina hoe tia an'Andriamanitra sy ny mpiara-belona aminy. Ireo fiangonana izay nanatanteraka fomban-drazana dia very ny tanjon'Andriamanitra.
Rehefa nihantona teo amin’ny hazofijaliana i Jesoa, dia niaraka tamin’ny fianakaviany ny eritreriny ary ara-panoharana momba ny fiangonany ho avy. «Ary Jesosy, nony nahita ny reniny mbamin’ny mpianatra tiany, dia hoy Izy tamin-dreniny: Ravehivavy, indro ny zanakao! Dia hoy Izy tamin’ilay mpianatra: Indro, ity no reninao! Ary nanomboka tamin’izany ora izany dia nentin’ilay mpianatra niaraka taminy izy » (Jaona 19,26-27). Nitodika tany amin’ny reniny sy tamin’i Jaona mpianatra izy, ary tamin’ny teniny no nametrahany ny fiandohan’ny hahatongavan’ny fiangonana, dia ny fianakavian’Andriamanitra.
Ao amin'i Kristy isika dia lasa “mpirahalahy”. Tsy fanehoana fihetseham-po akory izany fa mampiseho sary tsara ny maha-fiangonana antsika: voantso ao amin'ny fianakavian'Andriamanitra. Andoavambola tsara mifangaro tsara amin'ny olona sarotiny. Eto amin'ity fianakaviana ity dia misy olona fadiranovana demonia taloha, mpamory hetra, dokotera, mpanarato, radical radical, mihemotra, mpivaro-tena taloha, tsy jiosy, jiosy, lehilahy, vehivavy, antitra, tanora, akademisiana, mpiasa, extroverts na introverts.
Andriamanitra irery no afaka nampiditra ireo olona rehetra ireo ary nanova azy ireo ho firaisana iray mifototra amin'ny fitiavana. Ny marina dia ny hoe miara-miaina toy ny tena fianakaviana iray ny fiangonana. Amin'ny alàlan'ny fahasoavana sy ny fiantsoan'Andriamanitra, ny toetran'ny endrika samy hafa dia miova ho endrik'Andriamanitra ary noho izany dia mijanona eo amin'ny fitiavana hatrany.
Raha ekenay fa ny foto-kevitry ny fianakaviana dia tokony ho ohatra amin'ny fiainam-piangonana, inona no fianakaviana mahasalama? Ny toetra iray asehon'ny fianakaviana miasa dia ny fiahiahiana ny hafa amin'ny mambra tsirairay. Ny fianakaviana salama dia manandrana mamorona ny tsara indrindra ho an'ny tsirairay. Ny fianakaviana salama dia miezaka ny manampy ny mpikambana tsirairay araka izay tratrany. Tian'Andriamanitra ny hampivoatra ny fahaizany amin'ny alalany sy ao aminy. Tsy mora matetika ho antsika olombelona izany, indrindra fa ny fahasamihafan'ny olona sy ny olona manao fahadisoana izay fianakavian'Andriamanitra. Betsaka ny kristiana mandehandeha mba hitady ny fiankohonana ara-pivavahana mety, nefa nasain'Andriamanitra ho tia anay ianao. Hoy ny olona iray indray mandeha: Afaka tia ny fiangonana mety ny olona rehetra. Ny fanamby dia ny hitia ny tena fiangonana. Fiangonan'Andriamanitra ao amin'ny mpifanolobodirindrina.
Ny fitiavana dia mihoatra noho ny fahatsapana fotsiny. Misy vokatr'izany eo amin'ny fitondran-tenantsika. Ny fiarahamonina sy ny fisakaizana no singa manan-danja amin'ny fianakaviana mirindra. Na aiza na aiza misy ny Soratra Masina manome alalana antsika hampiato ny fandehanana any am-piangonana, ho lasa fianakaviana satria nisy olona nanao zavatra tamintsika. Nisy adihevitra be sy adihevitra be tao amin'ny Fiangonana tany am-boalohany, saingy ny filazantsara sy ny fitoriana nataony dia nitazona sy nandresy hatrany, isaorana ny Fanahy Masin'Andriamanitra.
Rehefa tsy nifankahazo i Evodia sy i Syntyke, dia nampirisika an’ireo antoko nandray anjara i Paoly mba handresy ny tsy fitovian’izy ireo (Filipianina). 4,2). Niady hevitra mafy momba an’i Jaona Marka i Paoly sy Barnabasy indray mandeha, fa nisaraka izy ireo5,36-40). Nanohitra an’i Petera nifanatrika i Paoly noho ny fihatsarambelatsihy teo amin’ny Jentilisa sy ny Jiosy (Galatiana 2,11).
Azo antoka fa misy fotoana tsy hifaneraserana, fa ny maha-fianakaviana iray an'i Kristy dia midika hoe hiaraka amin'izy ireo isika. Ny fitiavana tsy manam-petra na amin'ny teny hafa, ny tsy fananana fitiavana no mahatonga antsika hihataka amin'ny vahoakan'Andriamanitra. Ny fijoroana ho vavolombelona momba ny fianakavian'Andriamanitra dia nilaza fa tamin'ny alàlan'ny fifankatiavantsika dia ho fantatry ny rehetra fa olona Azy isika.
Misy tantara ao amin'ny banky iray izay nanipy vola lava iray tao anaty kaopy amin'ny mpangataka iray vita an-tongotra nipetraka teo amin'ny arabe teo anoloan'ny banky. Saingy tsy toy ny ankamaroan'ny olona, ​​ny banky dia nanantitrantitra foana ny fahazoana ny pensil iray izay teo akaikiny. Mpivarotra ianao, hoy ilay mpiantoka, ary manantena foana aho fa sarobidy amin'ireo mpivarotra izay amandrahako orinasa. Indray andro dia tsy teny amin'ny arabe ny tongotra amputee. Nandalo ny fotoana ary hadinon'ilay mpiasan'ny banky ny momba azy mandra-pidiny tao amin'ny tranobe iray ary nipetraka teo amin'ny kiosk ilay mpangataka taloha. Miharihary fa tompon'ny orinasa kely iray izy izao. Manantena foana aho fa mbola ho avy ianao, hoy ilay rangahy. Ny adiresinao indrindra dia hoe eto ianao. Nolazain'izy ireo hatrany fa "mpivarotra aho". Nanomboka nahita ny tenako toy izany aho fa tsy toy ny mpangataka mandray fiantrana. Nanomboka nivarotra pensilihazo aho - maro tamin'izy ireo. Nanome fanajana ny tenany izy ireo ary nahatonga ahy hahita fomba hafa.
Mety tsy hahita ny Eglizy akory izao tontolo izao amin'ny tena izy, fa tokony kosa! Kristy manova ny zavatra rehetra. Misy tena fianakaviana ao aminy izay handany ny fiainana mandrakizay miaraka. Izy dia tonga mpirahalahy sy fianakaviana, fianakaviana na eo aza ny tsy fitovian-kevitra rehetra. Ireo fifamatorana fianakaviana vaovao ireo dia ho ao amin'i Kristy mandrakizay. Andao hanohy hanaparitaka ity hafatra ity amin'ny teny sy ny atao amin'ny tontolo manodidina antsika.